Ambongadiny poketra sakafo biby Mpanamboatra sy mpamatsy |Yingzhicai
voankazo endrika kitapo
kitapo yaourt ankizy mahafinaritra
Anarana Spoutedkitapo ho an'ny sakafo saka / sakafom-biby
Fahafahana ambony indrindra 30g–2 kg
Applications Sakafo alika, sakafo saka, sakafo ho an'ny biby fiompy rehetra
Karazana kitapo Kitapo sakafo ho an'ny biby fiompy / zipper kitapo sakafo ho an'ny biby fiompy
taratasy fanamarinana ISO 9001;ISO 14001, BRC-PACKAGING.
Rafitra sy fitaovana PET/PE;PET/NY/PE;PET/AL/NY/PE;PET/MPET/PE
Accessories Pouch voapoizina
pirinty natao tamin'ny Maximum 10loko.
Dingan'ny fanontana Fanontam-pirinty gravure
Fahaizana famokarana 50,000 pcs isan'andro
seranana fandefasana entana Qingdao, Sina
Ny kitapo 1.spouted dia tetika fonosana matotra amin'ny fonosana sakafo saka na alika, izay manintona na amin'ny vidiny na amin'ny kalitao.Ny ankamaroan'ny fonosana sakafo saka eny an-tsena dia mampiasa kitapo misy tombo-kase quad, ary ny fanontana marina dia afaka manome endrika tsara ho an'ny vokatrao.
2. Ny kitapo retort dia azo andrahoina amin'ny 130 ° C mandritra ny 30 minitra, izay mahafeno tanteraka ny fepetra fanaterana UHT, miantoka ny fiarovana sy ny fahadiovan'ny sakafom-biby gravy ao anaty kitapo.
Ny fananan'ny sakana avo amin'ny paosy retort dia afaka miantoka ny fitehirizana ny fahadiovana ho an'ny sakafom-biby gravy aorian'ny sterilization, ny atiny ao anaty paosy dia afaka mamerina ny kalitao tsara ary tsy mora voan'ny tontolo ivelany.
Ny fahafahan'ny paosy fisaka misy tombo-kase 8 lafiny dia tena kely, mety amin'ny fanaovana sakafo isan-karazany gravy biby fiompy insmall packages.very fasion.
Ny kitapo sakafo ho an'ny biby fiompinay, mampiasa akora famonosana maharitra sy mahavelona, ​​dia lasa vokatra fototra ho an'ny marika maro tato ho ato.
Ny toetran'ny kitapo retort dia tena mety amin'ny fanaovana kitapo sakafo ho an'ny biby fiompy mando, satria matetika ny sakafo saka mando toy izany dia mila sterilize amin'ny fandrahoan-tsakafo.
Miaraka amin'ny endri-javatra mijoro tsara dia azo aseho tsara eo amin'ny talantalana ny poketrantsika.
Amin'ny ankapobeny dia tsy dia lehibe ny fahafahan'ny paosin'ny retort mitsangana, kanefa mora apetraka amin'ny toerana tsy misy farango na fitaovana hafa izy ireo.
teo aloha: saosy spouted kitapo
Manaraka: Kitapo fisotroana voankazo